''Abbaan koo waggoota 16f hidhame yeroo hunda akka waan na waliin jiruuttin yaada'' - BBC News Afaan Oromoo
''Abbaan koo waggoota 16f hidhame yeroo hunda akka waan na waliin jiruuttin yaada''
20 Fuulbana 2017
Goodayyaa suuraa Abbee Siyyuum abbaa ishee waliin
''Abbaan koo waggoota 16f hidhame yeroo hunda akka waan na waliin jiruuttiin yaada''
Gaazexessaa fi ogeessi kaameeraa beekamaan lammii Ertiraa, qabsaa'aa Siyyum Tsehaaye, erga akkuma bahetti hafee waggoota 16 ta'eera.
Intalli isaa kan jalqabaa, Abbee Siyyuum guyyaa inni itti qabame Fuulbaana 8 yaadachuudhaan ''abbaa koo yaadeera, anii fi haatii koos abbaa koo yaannee jirra jetti. Keessattuu baatii kana keessa yaaddoon maatii caalaa akka cimuus ni dubbatti.
Ertiraatti mana hiidhaa ministroonnii fi jenaraaloonni 11 akkasumas erga gaazexoonni dhunfaa 11 labsiin cufamanii boodas qopheessitoonni isaanii hidhaatti darbataman. Gaazexessittoota yeroo sana qabamanii hanga har'aa achumatti tursiifaman keessaa tokko gaazexessaa Siyyuum.
Innis ta'e ministiroonnii fi jenaraalonni waliin hidhaman hanga har'aattuu himannaan mana murtiitti irratti hin banamne. Ijoollee, maatii ykn firoonnis akka gaafataniif hin hayyamamu.
Intalli isaa Abbeen wayita Siyyuum hidhamu daa'ima waggaa lamaa turte. Amma umriinshee waggaa 18.
Goodayyaa suuraa Abbee fi Bayilulaa
Haatii warraa Siyyuum Aaddee Saabaa Gabramasqal jedhamti. Abbaan warraashee yammuu hidhamutti, isheenis intala isaanii lammaffaa, Bayilulaa garaatti baatti turte.
Abbaan warraa ishees sababii ittiin hidhame akkas jettee jirti. ''Garaagarummaa qondaaltoota mootummaa jidduutti uumameen, adeemsa dimookraasii keenyaaf ka'umsa ta'uu waan danda'u, akkasumas oggantoonni keenyas waan walitti dhiyaataniifuu baayyee na hin yaachisu,'' jechuun midiyaa dhunfaatiif wanta barreesseen to'annaa jala oole.
Ijoollummaa fi erga guddatees jaalala abbaa argachuu kan hindandeenye durbee Abbeen, ''Siyyuumiin alkanii guyyaan yaadna. Yeroo hidhamu xiqqoo waanan tureef baayyee hinyaadadhu. Garuu obboleettiin tiyya Bayilaal irraa ana wayya. Isheen amma kiyyaattuu waan hinarginiif baayyeen isheef gadda. Guyyaa tokko ijaan arguun hangam akka isa jaalannu itti himuuf hawwina,'' jetti hawwiin cinqamaa.
A.L.A Fulbaana 18 bara 2001, guyyaa haalli siyaasa Ertiraa itti geeddarameedha.
Waraana Itiiyoo- Ertiraa bara 1998 -2000tti gaggeefame booda, bara 2001tti haala jalqabbii fi adeemsa waraanichaa ilaalchisee qondaaltoota Ertiraa jidduutti gaaffiin ka'uu eegale.
Boodas gareen J-15 jedhamuu fi kan ministroota 15, jenaraaloota, qondaaltoota mootummaa olaanoo fi abbootiin taayitaa Adda Ammataa keessatti argamanis, dhimmicha irratti komiisaanii ibsuuf Preezidaant Isaayyaas Afawarqiin walgahii akka waamaniif gaaffii dhiyeessan.
Preezidaantichi garuu dogoggoraa jirtu jechuun gaaffii isaanii jalaa kuffisan. Kanatti aansunis qondaaltoonni addichaa fi uummataaf xalayaa ifatti barreessuun, gaazexoota dhuunfaa garaa garaa irrattis dhimmicha ilaalchisuun gaaffii fi deebii taasisan.
Booda keessas waldiddaan jidduu isaanii cimaa dhufuun, Fulbaana 18, 2001 mootummaan gaazexoonni dhuunfaa cufamusaanii ifatti labsee, gaazexeessitoota biyya keessatti argaman 11 fi namoota hedduu yaada J-15 ni deeggaru jedhaman hunda to'annaa jala oolche. Erga mana hidhaatti darbatamaniis kunoo waggoonni 18 lakkaa'amaniiru. Hanga har'aattis mana murtiitti hindhiyaanne. Balleessaan isaanis maal akka ta'eelleen uummatatti wanti himame hin jiru. Namni kamiyyuu akka gaafatus hinayyamamu.
Goodayyaa suuraa Waggoota 16f hidhaarra kan argamu, Siyyuum Tsahaayye
Intalli Siyyum, Abbeen abbaan ishee karaa ogummaasaatiin, ilaalchaa fi yaada isa gaazexaa irratti barreessuu isaa qofaaf murtee tokko malee waggoota 16f hiidhaa keessa turuun isaa baayyee ishee yaachisee jira.
Kanaafuu, yeroo garaa garaatti Dhaabbata Mirga Namoomaa Jeenev argamutti dhiyaachuun abbaan ishee murtii akka argatuuf gaafatte jirti.
''Namoonni abbaa kiyya beekanis akka kan namoota jaalatuu fi gargaaru, cimaa fi kan hojii jaalatu akkasumas nama dhugaaf dhaabbatu ta'uusaa natti himu. Kanaanis nan boona. Ergan guddadhee boodas abbaan koo waan hidhameef midiyaarraa akkan hubachuu danda'eetti, waldiiddaa qondaaltoota biyyattii jidduutti uumameen, walii galteen hiikuu qabdu jedhee barreessuun hidhame.''
''Waggoota 16 darbaniif abbaan koo jiddu keenya ta'uu baatuus, wayita soorannu hunda kadhannaan waan yaadannuuf afuuraan yeroo hunda nu waliin jira,'' jetti.
Guyyaa tokko abbaa ishee akka agartu kan abdattu Abbeenis, ''yoon arguus akkuma ati hawwiteetti kunoo barattuu cimtuu siif ta'eera jedhe itti himuuf, barnoota koo ciminaan hordofaan jira. Obbooleettii koos haaluma kanaanan cimsaa jira.''
Akkuma yeroo hundumaa jettu, ammas oggantoonni mootummaa Ertiraa maaloo ijoollee keessan bakka keenya kaa'uun nuuf yaadaa. Ijoolleen keessan jaalala maatii isaanii dhabanii akka guddataniif ni hayyamtu turtanii? Maaloo lapheen keessan nuuf yaa laafu,'' jechuun abbaan ishee akka hiikamuuf gaafatti.
Abbeenis wayita ammaa kanatti biyya Faransaayi, Paaris kan jiraattu yoo ta'u, barrattuu damee dinagdee (economics) ti.
Ministirri Muummee ittaanu eenyu laata?
Abbaan ilmasaa boorsaa keessa kaa'ee Ispeen galuuf ture qabame
Tiraamp meeshaa waraanaa fooyya'a irratti qoqqobbii kaahan
'Labsiin yeroo muddamaa mirga namoomaa sarba'
Gondaritti laganaan gabaa Oromiyaatti simannaan hidhamtootaa ittifufe
Balaan ibiddaa qabeenyaa qarshii mil. 12 barbadeesse
Shamarran haleellaa Bookoo Haraam jalaa miliqan